ဖြူ စင်သောစိတ်ကလေး: January 2011
သာယာကုန်းရွာလေးသည် ရွာလေးဆိုသော်လည်း မြို့ငယ်လေးတစ်မြို့အလား စည်ကားလှ၏။ လူများစုမှာ
လယ်ယာ လုပ်ငန်းလေးနှင့် အသက်မွေးကြသလို တစ်ချို့ကြတော့လည်း ကုန်သည်အလုပ် တစ်ချို့ကျတော့
လည်း မြစ်ချောင်း အင်းအိုင်တို့တွင် ဖားရှာ ငါးရှာနှင့် အသက်မွေးကြ၏။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ မနက်ခင်းနေခြည်
နှင့်အတူ လတ်ဆတ်သော လေညင်းနှင့် ရိုးသားသော ရွာသူရွာသားများ၏ သက်ဝင်လှုပ်ရှားချိန်တို့ကား မြို့ပြ
၏ ဆူညံသော အသံတို့နှင့် နိုးထသောမနက်ခင်းနှင့်ကား အတော်ပင် ကွာခြားလှ၏။ သူသည်မနေ့ညကမှ
သူ့ဦးလေးဖြစ်သူ ဦးလေးသာလှ တို့ရွာသို့ အလည်ရောက်လာချင်းဖြစ်သည်။ သူအိပ်ယာထ မျက်နှာသစ်ပြီး
အိမ်ရှေ့ ကွပ်ပြစ်လေးပေါ်မှာ သူ့ဦးလေး၏မိန်းမဖြစ်သူ အရီးရွှေစီစဉ်းပေးသော မနက်စာအား မျှော်နေချင်း
ဖြစ်သည်။ မနေ့ညက ခရီးပန်းလာသည်ကတစ်ကြောင်း ကားကလဲအကြာကြီးစီးလာရသောကြောင့် မနေ့ည
က သူမယ်မယ်ရရ ဘာမှ မစားဖြစ်လိုက် ခုကား ဗိုက်ထဲတွင် သံစုံမြည်နေလေပြီ။
(ဦးလေး) ဟေ့ မရွှေရေ မနက်စာလေး မြန်မြန်လုပ်ပါဟ ဒီမှာ နင့်တူကြီး ဆာနေပြီနဲ့တူတယ် မနေ့ညကလဲ
ဘာမှ ကောင်းကောင်း သိပ်မစားတော့ လေ
(အရီးရွှေ) လာပြီ လာပြီ ကိုသာလှရေ အိမ်ကနွားမကို နို့ညစ်ရင်း အစာလေးကြွေးနေတာနဲ့ နဲနဲလေးကြာ
သွားတယ်..ဆာနေပြီလား တူကြီး ကိုကောင်း..
သူ့နာမည် ကောင်းမြတ် ဦးကြီးနှင့် အရီးရွှေကတော့ ကိုကောင်းဟုသာ ခေါ်လေသည်။ ပြောပြောဆိုဆို
နွားနို့ပူပူနှင့် အငွေ့တထောင်းထောင်းထနေသော အရီးရွှေ လက်ရာ ကောက်ညှင်းပေါင်းနှင့် ပဲပြုတ်ဆီ
ဆမ်းတို့အား သယ်ဆောင်ပြီး မီးဖိုဆောင်ထဲမှ ထွက်လာလေပြီ။
(ကောင်းမြတ်) အရီးလေး လာလာ ကျွန်တော်ကူသယ်ပေးမယ်။
ပြောပြောဆိုဆို သူထသွားပြီး ကူလိုက်မိသည်။
(ဦးလေး) အေးလာဟေ့ ဒီမှာ မင်းတူတော်တော်ဆာနေပြီ မင်းတွေ့တာနဲ့ ထဆွဲတာသာ ကြည့်ကွ။ ပြီးတော့
ငါ့အတွက်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ထမင်းကြမ်းနဲ့ ငါးခြောက်ဖုတ် ဆီဆမ်းလေးနော်။
(အရီးရွှေ) အေးပါတော် မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ကျန်ခဲ့လို့ပါ။ မနိုင်လို့ပါတော်..တစ်ကယ်ထဲ ၀ိုင်းသယ်ပေးမယ်
တော့ စိတ်မကူးဘူး အိမ်ရှေ့ကနေ ထိုင်အော်နေတယ်။
(ဦးလေး) ဟားဟား ကိုကောင်းရေ မင်းရဲ့ အရီးကတော့ ပါဝါပြနေပြီကွ သွားသယ်လိုက်အုန်းမယ်ဟေ့
သြော် အရွှေရေ တို့ဘုန်းကြီးအတွက်ရော ဆွမ်း အဆင်သင့်ပဲလားကွ
(အရီးရွှေ) အဆင်သင့်ပါတော် ..အားလုံးပြင်ပြီးသား လောင်းရုံပဲ
အင်း သူနေထိုင်ခဲ့သော အဆင့်အတန်းမြင့်လှသည်ဆိုသော တိုးတက်လှသည်ဆိုသော မြို့ကြီးပြကြီး၏
မနက်ခင်းနှင့်ကား ဆီနှင့်ရေလို ကွာခြားလှ၏။ နာရီနိုးစက်သံ ကလင်ကလင်ဆိုသည်နှင့် ဦးအောင်ထရ၏
ရေချိုးခန်းအား သူ့ထက်ငါ အရင်ဦးကြ၏။ မနက်စာဟူသည် လမ်းမှာတွေ့သော ဆိုင်မှအဆင်ပြေသလို ပါဆယ်ဆွဲ၏ ကောင်းသည်မကောင်းသည် အရေးမကြီး ဗိုက်ပြည့်ဖို့ကသာ အဓိက။ ရုံးကိုရောက် အလုပ်စားပွဲမှာ ထိုင်လိုက်သော အခါ မနက်ခင်းတစ်ခုသည် ၀ါးမျိုခံသွားရလေပြီ။ အသက်၀၀ ရှုခဲ့လား မရှုခဲ့ရလားတောင်သူမမှတ်မိ။ ခုတော့ ကြည့်လေ ..ကွာ၏ တော်တော်ကွာ၏။အော် သို့သော်လဲ လူ..လူ ဖြစ်နေလေတော့ရေကြည်ရာ မျက်နုရာ ရှာရဖွေရသည်။ဖြစ်နိုင်လျှင်တော့ အမိမြေကြီးအားလဲ တိုးတက်စေချင်သည်ဒါဆို သူတို့လို လူငယ်တွေအဖို့ မိသားစု၏ရင်ခွင်နှင့် ဝေးပြီး ရေကြည်ရာ မြက်နုရာသို့ သွားစရာမလို။ခုတော့ အထီးကျန်ချင်းတို့အား မြိန့်မြိန့်ကြီးစားသုံးပြီး ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး လူစင်စစ်ကနေ စက်ရုပ်လိုဘ၀ပြောင်း ၊ ရသမျှထဲက နောက်တော်ပါမိသားစုအား ပြန်ထောက်ပံ့လိုက် ၊လူငယ်တို့သဘာဝ ချစ်ချင်းမျှော်လင့်ချင်း အိမ်မက်တွေရေစုံမျှောသွားလိုက်နှင၊့် ပြောင်ပြောင်လက်လက် ထိန်ထိန်တောက်လျှက် လှချင်တိုင်းလှနေသော သည်တွင်းကြီးထဲမှာ ထမင်းမစား ရေမသောက်ပဲနေရသလို ခံစားရ၏။တစ်ချို့
ကြတော့လဲ ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးနေ၏ တွင်းထဲကနေပြန်မတက်ချင်ကြ။ သူကတော့မရ ။ကျခဲ့တာလဲကြာပြီ
စက်ရုပ်ဘ၀လဲ ပြောင်းလုနီးနီးမှာ သူထိုတွင်းကြီးထဲက ရုန်းထွက်ခဲ့ချင်းဖြစ်သည်။ပြီးတော့ ဦးလေးရှိရာ
တောကို သူစိတ်ပြေလက်ပျောက် အပန်းဖြေထွက်လာခဲ့၏။ ကျန်တဲ့ အနာဂတ်ကတော့ ပြီးမှပဲ ဆက်စဉ်းစား
တော့မည်။ တစ်ကယ်ဆို ဒီမြေဒီရေ ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကို ပြန်ရောက်သည်နှင့် သူ့လို ဒုတိယအရွယ် လူငယ်တစ်
ယောက်အတွက် အနာဂတ်တွေေ၀၀ါးမသွားသင့်။ပြတ်သားနေသင့်သည်။ ခုတော့လဲ။ အာ..ကျွတ်သေတော့
မှာပဲ အပန်းဖြေလာပါတယ်ဆိုမှ ဘာတွေတွေးနေမှန်းမသိ။ ခုနက သာယာမှုလေးတောင် ပြန်ခေါ်ယူရမည်။
ဒီလိုလေးလဲ တွေးအရီးသယ်လာပေးသော အမွေ့တစ်ထောင်းထောင်း အုန်းနို့နံ့သင်းသင်း ကောင်ညှင်းပြန် ပေါင်းနှင့် ပဲပြုတ်ဆီစမ်းလေး တစ်လုတ်လွေးလိုက် နွားနို့လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်လေး တစ်ငုံလောက် ကောက် ပြီးငုံလိုက် မစားရတာ ကြာနေ၍လားမသိ လျှာဖျားအရသာ စိမ့်သွားတာများ လက်ကအလျှင်မမှီချင်ဘူး။ ပါးစပ်က၀ါးနေတာ။
(ဦးလေး) ကိုကောင်းရ မင်းနှယ်ဖြည်းဖြည်းစားပါဟ။ ဘယ်နှယ့်ကွာ နိုင်ငံခြားကပြန်လာပြီး ကောက် ညှင်းပေါင်း ပဲပြုတ်ဆီစမ်းများ အလုအယက် တစ်ယောက်တည်းစားနေရတယ်လို့ကွာ။
ရိုးသားသော တောသူတောင်သား ဦးရီးအား နားလည်အောင် သူဘယ်လို ဘာသာပြန်ရမှန်းမသိ။တစ်ကယ် တော့ နိုင်ငံခြားပြန်ဆိုသည်မှာ ရှာ၍ရသောပိုက်ဆံအား မြင်သာမြင်ရပြီး မသုံးရသော သူသာဖြစ်ကြောင်း ရိုးသားသော ဦးရီးမသိ။ပိုက်ဆံတောင် ကြာကြာမကိုင်ဖူး။ ရတဲ့လခ ဘဏ်ထဲဝင် ၀င်ပြီးနောက်နေ့ မြန်မာကို ပြန်ပို့။ လကုန်ရက် Shopping ချင်ရင်တောင် ဟယ်ကနဲ ဟင်ကနဲ ဟင်း ကနဲ သက်ပြင်းတွေချပြီး ပေါင်မုန့်ခြောက်ခြောက်ကြီးနှင့် အဆီများသော တောင်ပံကြော်အား စား၍ အေးသော ချိုသောဗူးအပြည့် အချိုရည် ဗိုက်ထဲဖြည့်ပြီး နောက်ကောက်ကျခဲ့သည်က များလှသည်။ ချစ်သူခင်သူပေါသော်လည်း တစ်ကယ် တမ်းကိုယ့်အနားကြတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ထား တဲ့ မေတ္တာက ခပ်ရှားရှား။ လက်ချိုးပြီးတောင်ရီလို့ရ၏။ အချစ်ဆိုလျှင်လဲ လွမ်းပြီးချစ်။ တမ်းတပြီးချစ်။မျှော်လင့်ပြီးချစ်။ လက်တွေ့က ဗလာနိတ္တ။ စားတော့လဲ ဗိုက်ပြည့်ပြီးရော။
(ဦးလေး) ဟေ့ကောင်ကြီး ကိုကောင်းစားလေကွ ဘာတွေ တွေးနေတာတုန်း။ ဘာလဲ ဦးရီးပြောလိုက်လို့လား။
(အရီးရွှေ) တော်ကလေ..လေကြောကိုရှည်တယ် ကလေးအားရပါးရစားနေတာကို..
(ကောင်းမြတ်) မ…မဟုတ်ပါဘူး အရီးရယ် ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ဟိုမှာနေခဲ့စားခဲ့တာတွေကို တွေးမိလို့ပါ။
(ဦးလေး) ဘာလဲဟိုမှာစားတဲ့ အရသာလောက် မကောင်းလို့လားကွ။
ကောင်းမြတ် ရီချင်မိသွားသည်။ အရသာ..ဟင်းဟင်း.. နိုင်ငံခြားမှာ အရသာမရှိ ဗိုက်သာရှိ၏ လို့သာဖြေလိုက် ချင်သည်။ အရသာ ကောင်းကောင်းစားချင်လို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ချက်ပြန်တော့လဲ လက်ရာမြှောက်လှ သော သူ၏စားဖိုမှုးလက်ရာအား သူကိုယ်တိုင်ပင် တစ်ခါတစ်ခါ အားပေးလို့ မကုန်ချင်။
(ကောင်းမြတ်) မဟုတ်ပါဘူး ဦးရီးရ ဟိုမှာက ဗိုက်ပြည့်အောင်ပဲစားတာလေ။ အရသာခံပြီးစားချင်ရင်တော့ စနေ၊တနင်္ဂနွေ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ချက်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကလဲ ချက်တာပြုတ်တာကတော့လေ..
သူ၏မချိသွားဖြဲရီသံအား ဦးရီးကသဘောကျစွာ အော်ပြီးရယ်၏။
(ဦးလေး) ဟားဟား အေး ဒါဆိုလဲ မင်းမိန်းမသာမြန်မြန်ယူလိုက်တော့ကွာ။ လျှာရင်းလေးမြတ်အောင်.
အင်း..လျှာရင်းပဲမြတ်မလား လျှာရင်းပဲပြတ်မလား ယူကြည့်မှပဲ သူသိမည်။ခုတော့ သူလက်ကျန် ကောက် ညှင်းပေါင်းတစ်ဆုပ်အား နောက်ဆုံးရှင်းလိုက်၏။ ပြီးနောက်..
(ကောင်းမြတ်) ဦးရီး ကျွန်တော် ယာထဲလိုက်ခဲ့မယ်နော်။
(ဦးလေး) မင်းနှယ် နေပူကပူနဲ့ မင်းတို့လို air con ခန်းထဲအလုပ်လုပ်ရတာ မဟုတ်ဘူးကွ။နေပူကျဲကျဲထဲ ချွေးဒီးဒီး ကျအောင် လုပ်ရတာဟ
ငါ့နှယ် ခက်တော့နေပြီ air con ထဲ လုပ်နေပေမယ့် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ တစ်ချိန်လုံး နေပူကျဲကျဲထဲ သူ့စိတ်တွေ ရောက်နေတာ ဘယ်လိုပြောပြရပါ့။
(ကောင်းမြတ်) အင်း ဦးရီးကို ရှင်းပြဖို့က နဲနဲတော့ ခက်တယ်ဗျ။ ဟိုမှာက ဦးရီးပြောသလိုပဲ နေပူထဲ ချွေး တော့ မထွက်ဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် အလုပ်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတော့ ရှိတယ်ဦးရီးရဲ့။ ပိုက်ဆံရတာနဲ့ တန်အောင် လူမပင်ပန်းပေမယ့် စိတ်တော့ပင်ပန်းတာပေါ့။ ကဲပါ ဦးလေးကိုရှင်းနေရရင် ပြီးမှာ မဟုတ်ဘူး ကျွန်တော်တို့ သွားကြစို့ ။
ဦးရီး လဲဒီကောင် ဘာတွေပြောနေပါလိမ့်ဆိုသော အကြည့်ဖြင့် တစ်ချက်ကြည့်၍
(ဦးလေး) အေးလေ သွားဆိုလဲ သွားကြတာပေါ့။
ဦးရီးတို့ ယာထဲရောက်တော့ လတ်ဆတ်သော လေပြေလေညင်းတို့အား သူတစ်ဝကြီး ရှုသွင်းလိုက်၏။ လတ်ဆတ်ပြီး အားအင်တွေ ပြည့်သွားသလို ခံစားရ၏။မျက်စိတစ်ဆုံး ရှုမငြီးသော စိမ်းလန်းစိုပြေသော လွင်ပြင်ကြီးကို မြင်နေရ၏။ ရိုးသားသော တောသူတောင်သားများ၏ အလုပ်လုပ်နေရင်း တေးညည်းသံကိုလဲ ကြားရ၏။ တီတီတာတာ ကျလိ ကျလိ ဆို ကျေှးငှက်တို့၏ တေးဆိုသံတွေလဲ ကြားနေရ၏။
တစ်ကယ်တမ်းဆိုရလျှင် ဤမြေကြီးသည် သာယာ၏။ရိုးသား၏။ လှပ၏။ သည်လို အရာရာပြီးပြည့်စုံနေသော လောကကြီးတွင် ဒုတိယအရွယ် သူလိုလူလတ်ပိုင်းတစ်ယောက် အတွက် အဘယ့်ကြောင့် အနာဂတ်တို့ ပျောက်ဆုံးနေသနည်း။ သူ့တွင် ပညာပြည့်စုံ၏။ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုရှိ၏။ သူ့အတွက် အလုပ်သာလို၏။ ရသော အလုပ်သည်လည်း လူတစ်ယောက်အတွက် လူတန်းစေ့ နေနိုင်သော လခကို သူလိုအပ်၏။ထမင်း တောင် နပ်မှန်မှန်စား၍ မရသော လခအားသူမလိုလား။ သို့သော် သူလိုချင်သော လခအတွက် အလုပ်ရှင် သည် ၀င်ငွေကောင်းသော လုပ်ငန်း လည်ပတ်နိုင်သော လုပ်ငန်းလိုအပ်နေပြန်၏။ ထိုလိုအပ်သော လုပ်ငန်း..
ခဏတော့ခွဲခွာရအုန်းမည်….ခဏတော့ ခွဲခွာနေရပေအုန်းတော့ မည်။
ဒီနေ့ ဘယ်လိုပင် မောင်တို့ခြံဝင်းထဲ ၀င်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် အချည်းအနှီးသာ။အိမ်နောက်ဖက်က ပတ်ပြီး ၀င်ပြန်တော့လဲ မရ။ ခြံထဲဝင်လိုက်သည်နှင့် ပူလောင်လာ၏။ သူမ တစ်ညလုံးကြိုးစား၏။သို့ပေမယ့် အချည်းအနှီးသာ။ မည်သို့ပင် သူမကြိုးစားသော်လည်း မနက်မိုးလင်းကာနီး ရောင်နီလာပေတော့မည်။ဤ တစ်နေ့တော့ သူမ ခဲလေသမျှ သဲရေကျကာဖြင့် လာလမ်းအတိုင်းပြန်ရပေတော့ မည်။
ညက ခွေးအူသံတွေ ကြားရ၏။ခွေးအူသံတွေ ကြားရသည်မှာ အရင်နေ့တွေကထက် ကျောချမ်းစရာ ကောင်းလှသလို အိမ်ပတ်ပတ်လည်တွင်လဲ ခွေးဟောင်သံတွေ ပိုမိုဆူညံနေ၏။ သို့သော်လည်း သက်ပိုင်သည်ငြိ်မ်နေ၏။ အရင်နေ့တွေကလို မကြမ်း။ အိမ်နံရံ ပုတ်သံလည်းမကြား။ ထို့ကြောင့် ဦးတင်ဝင်းပြောသော ဆရာတော်ဘုရားကြီးအား အားလုံးယုံကြည် ကိုးစား သွားကြသည်။သုံးရက်မျှ ဦးတင်ဝင်းပြောသလို သူတို့ နေမ၀င်ခင် လူစုကြ၏။ နေ၀င်တာနဲ့ အိမ်ပတ်လည် ပရိတ်ရည်ဖြန်း၏ ထို့နောက် မည်သူမျှအိမ်အ၀န်းထဲမှ မထွက်တော့။ ည ၁၂ နာရီဆိုလျှင်တော့ ခွေးအူသံတွေ ကြားရမြဲ။လေးရက်မြောက်သောနေ့ မနက်ဦးတင်ဝင်း ပြန်ရောက်လာ၏။ ဦးတင်ဝင်း နောက် တွင် ကြည်ညိုဖွယ်ရာ ဆရာတော် တစ်ပါးနှင့်တစ်ကွ ကပ္ပိရကြီးတစ်ယောက် ပါလာ၏။ ဆရာတော်သည် ခရီး ရောက်လျှင် ရောက်ချင်းပင် သက်ပိုင်တို့ အ်ိမ်သို့ကြွပြီး သက်ပိုင်အား ကြည့်၏။ ထို့နောက်..
(ဆရာတော်)ဒါယကာမကြီး ဒေါ်ဝင်း ကျုပ်ခင်ဗျားသားကို ဘုန်းကြီးဝတ်ပေးလိုက်ချင်တယ်ဗျ။ ဘယ်လို သဘောရလဲ။
(ဒေါ်ဝင်း) တင်ပါ့ ဘုရား။ သားက စိတ်တွေကမငြိမ်တော့ဖြစ်ပါ့မလား ဘုရား။
(ဆရာတော်) အဲဒီအတွက်မပူပါနဲ့။ဒါယကာမကြီးသာ သဘောတူတယ်ဆိုရင် မနက်ဖြန် ဒီကလေးကို ဘုန်းကြီးဝတ်ပေးဖို့ ခုထဲက စပြီး စီစဉ်ပေတော့။ဟုတ်ပြီလား။
(ဒေါ်ဝင်း) တင်ပါ့ဘုရား.တပည့်တော် စီစဉ်လိုက်ပါ့မယ် ဘုရား.
(ဆရာတော်) အိမ်း ဒါဆိုလျှင် မနက်ဖြန်အတွက် စီစဉ်တဲ့သူကလဲ စီစဉ်။ ခုလောလောဆယ် သက်ပိုင်ကိုရေမိုး ချိုး သန့်ပြန်အောင်လုပ်ပေးလိုက်ကြ။ပြီးရင် အ၀တ်အစား သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ ငါ့ရှေ့ခေါ်ခဲ့ကြ။
ထို့နောက် ဆရာတော်သည် ရေတစ်ဖန်ခွက် သန့်သန့်တောင်း၏။ထို့နောက် ဘုရားစင်တွင် ကပ်လျှက်နှုတ်မှ နေ၍တိုးတိုး ရွတ်ဆိုတော်မူနေသည်မှာ ၁ နာရီနီးပါးမျှကြာ၏။ဆရာတော်ဘုရားကြီး ရွတ် ဖတ်ပြီးစီးသော အခါ သက်ပိုင်ကိုလည်း ပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်နေ၍ ဆရာတော်ရှေ့ သို့ ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကြ သည်။
(ဆရာတော်) ဒါယကာလေး လာကွဲ့ ဒီမှာထိုင်။
သက်ပိုင်သည် ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နှင့် ဆရာတော်ဘုရားရှေ့ ၀င်ထိုင်၏။
(ဆရာတော်) ဒါယကာလေး တင်းထားတဲ့ စိတ်တွေကို လျှော့ချလိုက်။ခုလိုနေရတာ မပူလောင်ဘူးလားကွယ့် ဒါယကာလေး ဒီလိုနေရတာ ကြိုက်သလားကွဲ့ ဟင်…
(သက်ပိုင်) အီး..ဟီး…ဟီး မကြိုက်ပါဘူး ဘုရား။ ဒါပေမယ့် နှင်းနွယ်က တပည့်တော်ကြောင့် သေရတာဘုရား။ တပည့်တော် အသုံးမကျလို့ နှင်းနွယ် သေရတာ။ တပည့်တော် မပြတ်သားလို့ တွေဝေလို့ နှင်းနွယ် မသေသင့်ပဲ သေတာဘုရား..တပည့်တော် ဘယ်လိုဖြေသိမ့်ရပါ့မလဲ ဘုရား..ပြီးတော့ ..ပြီးတော့
သက်ပိုင် ဆရာတော်အား မရဲတရဲ လှမ်းကြည့်၏။
(ဆရာတော်) ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါ ဒါယကာလေး။
(သက်ပိုင်) ညတိုင်း ညတိုင်း နှင်းနွယ်လာတယ်။ ပြီးတော့ တပည့်တော်ကိုခေါ်တယ်ဘုရာ့။ငိုလဲ ငိုတယ်ဘုရား။
(ဆရာတော်) ဒါယကာလေး ဘ၀ချင်းမှ မတူတော့ပဲ။ ငိုနေတာကိုတွေ့တယ် ဆိုပေမယ့် ဒါယကာလေးက သနားနေတော့လဲ ဘာများလုပ်ပေးနိုင်မှာမို့လို့တုန်း။ သူလာခေါ်တော့ လိုက်သွားတယ်ဆို အုန်း သူခေါ်တဲ့နေရာ သူရှိတဲ့နေရာ ဆီရောက်မယ်လို့ ထင်သလား ဒါယကာလေး။ ဖြစ်လာတဲ့ ဘ၀မှာ ကုသိုလ် ကံလို့ပဲ မှတ်ယူပါကွယ်။ ပုထုစဉ် ဆိုတဲ့အတိုင်း လူ့ဘ၀ကြီးက အချိုးအကွေ့များတယ်ကွဲ့။ ဘုန်းကြီးပြောတာ နားလည်ရဲ့လား။
သက်ပိုင် ဆရာတော်ကြီးအား တစ်ချက်မော့ကြည့်လိုက်၏။ထို့နောက်..
(သက်ပိုင်) တ…တ ..ပည့်တော် နားလည်ပါပြီ ဘုရား။
(ဆရာတော်) အိမ်း အိမ်း…ကဲ ဒါဆို ဟောဒီ ရေမန်းလေး သောက်လှည့်ကွဲ့။ ဘေးအန္တရာယ် တွေ ကင်းအောင်။
ရေမန်းအားသောက်ပြီးသော အခါတွင် သက်ပိုင်သည် အသားများတစ်ဆတ်ဆတ် တုန်လာလျှက် တစ်ခဏမျှ သတိလစ်သွား၏။ ခဏကြာသော် ပြန်လဲသတိရလာ၏။ ဤတစ်ကြိမ်တွင် သက်ပိုင်၏ မျက်လုံးများ ဂဏာမငြိမ် မဖြစ်တော့။ စိတ်ပြန်လည်ပြီး တည်ငြိမ်လာပုံနှင့် တစ်ခုခုကို သတိရသလို ဖြစ်သွားပြီ..
(သက်ပိုင်) အမေ..အမေ ရော ..အမေ..
(ဒေါ်ဝင်း) အမေ ရှိတယ်သား။ ပြောလေ ဘာပြောမလို့လဲ ။
(သက်ပိုင်) ကျွန်တော် နှင်းနွယ်တို့ အိမ်ကိုသွားပြီး နှင်းနွယ်နဲ့ တွေ့ပါရစေနော်..တစ်ခေါက်လောက် တော့ သွား ကြည့်ပါရစေ အမေရယ် နော်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပါ။
ဒေါ်ဝင်းလဲ သားကိုကြည့်ပြီး ၀မ်းသာရသလို နှင်းနွယ်လေးအတွက်ကတော့ စိတ်မကောင်းချင်း ကြီးစွာ ဖြစ်ရ ၏။ထို့နောက် ခပ်အက်အက် ငိုသံဖြင့် ..သက်ပြင်းရှည်ကြီး ချလျှက်
(ဒေါ်ဝင်း) ဟင်း………. သားရယ်.. အမေလဲ နောင်တရပါပြီ။ အမေ မှားမှန်းသိပါပြီကွယ်။ နှင်းနွယ်ကို သဂြိုလ်လိုက်တာ ၃ ပတ်ကျော်ကျော်လောက်ရှိပြီသားရဲ့။ သားက နေမကောင်းလို့ ဘာမှ မသိတော့တာ။
(သက်ပိုင်) ဟင်..တစ်ကယ်လား အမေ။ အဲဒါတစ်ကယ်ပဲလားဟင်။ မျက်နှာလေးတောင် နောက်ဆုံး ကြည့်ခွင့်မရလိုက်ပါလား နွယ်ရာ။အမေနဲ့ စကားများတဲ့နေ့က ညနေပိုင်း သားအိပ်ခန်းထဲကို နှင်းနွယ် ရောက်လာတယ်။ပြီးတော့ သားကို ရက်စက်တဲ့လူ ။လိမ်ညာတဲ့လူဆိုပြီး သားရဲ့ အနားကို ကပ်လာတာ တော့သိလိုက်တယ်။ အဲဒါနောက်ဆုံး မှတ်မိတာပဲ။ပြီးတော့ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လဲ သားမမှတ်မိတော့ဘူး အမေ။
(ဒေါ်ဝင်း) အေးပါ သားရယ် ..သား..ဆရာတော် ဘုရားကြီးကို ရှိခိုးလိုက်အုန်း။
(သက်ပိုင်) ဟုတ်ကဲ့ အမေ..။
ပြောပြောဆိုဆို သက်ပိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအား ထိချင်းငါးပါးဖြင့် ရိုရိုသေသေ ရှိခိုးဦးချလျှက် ကန်တော့ လိုက်၏။
(ဆရာတော်) ဒါယကာလေး သက်ပိုင် မနက်ဖြန်ကျရင် ဘုန်းကြီးဝတ်ရမယ်ကွဲ့။ တစ်လ နှစ်လလောက်ပေါ့။ဘုန်းကြီးတို့ ကျောင်းမှာပဲလိုက်ပြီး သတင်းသုံးလဲ့ကွဲ့။ ဆန္ဒရှိရဲ့လား ဒါယကာလေး။
(သက်ပိုင်) တင်ပါ့ ရှိပါတယ်ဘုရား…
(ဒေါ်ဝင်း) ဆရာတော်ဘုရား ညဘက်…. ညဘက် ပြသနာရှိသေးတယ် ဘုရား။ သားကခုနေကောင်းပြီးတော့ ညဘက်ကျမှ ပြန်ဖောက်မှာ စိုးရိမ်လို့ ပါဘုရား။ တပည့်တော်တို့ လုပ်နေကျအတိုင်း ပရိတ်ရေဖြန်းရအုန်းမလား ဘုရား။
(ဆရာတော်) အိမ်း လုပ်ထားတော့လဲလုံခြုံတာပေါ့ကွယ်။ဘုန်းကြီး ဒီည ဒီအိမ်မှာ ကြိမ်းမှာကွဲ့။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့ ဒါယကာမကြီး ။ ကဲ ကဲ စီစဉ်စရာရှိတာ လုပ်စရာရှိတာတွေ သွားပြင်ဆင်တော့ ကွဲ့။
ထိုနေ့ည ၁၂ နာရီ ခွေးအူသံတွေ လမ်းထိပ်မှ စပြီးဆူညံလာပြီ ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင်ပင်ဆရာတော်သည် ဒေါ်ဝင်း တို့ခြံပေါက်ဝသို့ ဆင်းသွား၏။ အိမ်ပေါ်မှ လူများကိုတော့ လုံးဝဆင်းလိုက်မလာရဟု မှာထား၏။ခြံ ပေါက်ဝ၌ တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့် စကားပြောနေသကဲ့သို့ မတ်တပ်ရပ်နေပြီးနောက် အိမ်ပေါ်သို့ ပြန်ကြွလာ၏။ ဆရာတော် အိမ်ပေါ်ပြန်ရောက်ပြီး ခဏမှာပင် ခွေးအူသံများလဲ တစ်ဖြည်းဖြည်း ဝေးဝေး သွားလေတော့သည်။
နောက်တစ်နေ့ မနက် သက်ပိုင်သင်္ကန်းစီးပေတော့မည်။ အရင်နေ့တွေမှ အိုစာသောမျက်နှာ မျက်တွင်း ဟောက်ပက်နှင့် သောကလှိုင်းများကြွနေသော သက်ပိုင်နှင့် ယနေ့ ခေါင်းရိတ်အပြီး တည်ငြိမ်အေးချမ်းသော မျက်နှာအားတွေ့မြင်ရသည်မှာ လွန်စွာမှပင် ကွာခြားနေလွန်းသည်။
နှင်းနွယ် သည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ မနေ့ညက ဖိတ်ကြားမှုအရသူမလာရောက်ရသော်လည်း တစ်ကယ် တမ်းတော့ ကျေနပ်မှုကား စိုးစဉ်းမျှမရှိ။ သူမကို မောင်လိမ်ညာလှည့်စားခဲ့သည်။ သူမချစ်ခဲ့သလောက် မချစ်ခဲ့။ သူမကတော့ ဖြင့်မိန်းကလေးတန်မဲ့ ကိုယ့်သိက္ခာကိုပင်မငဲ့ မောင်သာချစ်နေလျှင် သူမ၏ဘ၀ ပြီး ပြည့်စုံပြီ ဆိုသော စိတ်မျိုးဖြင့် မောင့်နောက်ကိုလိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ မိဘဆွေမျိုး အသိုင်းအ၀န်းများမှ သက်ပိုင်ကို ယူခဲ့လျှင် သက်ပိုင်သည် သူ့အမေကို မလွန်ဆန်နိုင်သဖြင့် အိမ်ထောင်ရေး မသာယာနိုင် ဘ၀ တစ်လျှောက်လုံး စိတ်ဆင်းရဲရမည်ဟု ပြောနေသည့် ကြားမှ သူမ မောင့်ကိုချစ်ခဲ့ရသည်။ ယုတ်စွအဆုံး မောင့် အမေကို မလွန်ဆန်နိုင်သောစိတ်ဖြင့် မောင်မလာမှာ စိုးသည့်အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေလိုက်မည် ဟု ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုခဲ့တာတောင်မှ မောင် ရောက်မလာခဲ့။ ညမှောင်မှောင်မှာ တစ်ကိုယ်တည်းကြောက် ကြောက်လန့်လန့် စောင့်ခဲ့ရသောစိတ်။ လုပ်ရက်လိုက်လေချင်းဟူသောစိတ်။ ကိုယ်ချစ်ရသောသူက ကိုယ့် ကိုယ်လိမ်လဲ လှည့်စားခဲ့ပြီ ဟူသောစိတ်တို့နှင့် တစ်ညလုံးငိုခဲ့ရသည်။ ခုတော့ဖြင့် ..ခုတော့ဖြင့်
(ဆရာတော်) ကဲ ဒါယကာလေး သင်္ကန်းတောင်းမယ်။ဘုန်းကြီးတိုင်ပေးမယ် ကွဲ့ နောက်ကလိုက်ဆို။
(သက်ပိုင်) တင်ပါ့ ဘုရား..
ပြီးနောက်တွင်တော့ သက်ပိုင်အား သင်္ကန်းစီးပေးလိုက်၏။
(ဆရာတော်) ကဲ တရားနာ ရေစက်ချမယ်ကွဲ့။
ဆရာတော်လဲ တရားဟောဖို့ ပြင်ဆင်နေသလို ရောက်လာကြသော ဧည့်သည်များလဲ တရားနာယူဖို့ ပြင်ဆင် လိုက်ကြ၏။ထိုအချိန်တွင်ပင် တရားလာနာသော လမ်းထဲမှ မစန်း ဆိုသောအမျိုးသမီးသည် ရုတ်တရက် ဟီးလုံးချပြီး ငိုလေပြီ။ရောက်လာကြသော လူအပေါင်း၏ စိတ်အာရုံတို့ သည် ထိုအမျိုးသမီးထံသို့ ရောက်ရှိသွား၏။
(ဆရာတော်) ဟဲ့ ဒါယကာမ ဘာလို့ ငိုနေတုန်းကွဲ့။
မစန်း၏ မျက်လုံးတို့သည် နီစွေးလျှက်။ စကားပြောလိုက်သော အသံသည် မစန်း၏ အသံမဟုတ်။
(မစန်း) တပည့်တော်မ နှင်းနွယ် ပါဘုရား။
(မစန်း) တပည့်တော်မ သက်ပိုင်တို့သားအမိကို မကျေနပ်ဘူုး။
(ဆရာတော်) ဒါယကာမလေး ဘုန်းကြီးမေတ္တာရပ်ခံပါရစေ။ သံသရာမှာ ကိုယ့်အတွက်လဲ မကောင်း သူများအတွက်လဲ အကျိုးမရှိ။ လောလောဆယ်ပဲ ဒါယကာမလေး ကိုယ့် အဖြစ်ကိုယ်ကိုယ် မြင်နိုင်ရဲ့ လားကွဲ့ ။ ကိုယ့် အတွက်ပါအောင် ကိုယ့်အတွက်ကောင်းအောင်ပဲ ကြိုးစားပါကွယ်။ ခုဖြစ်ပျက်သ မျှအားလုံးကိုလဲ သံသရာ တစ် ကွေ့မှာ တွေ့ကြဆုံကြတယ်လို့ပဲမှတ်ယူလိုက်ပါ။ဘ၀ချင်းက ခြားနေပြီပဲ။ ဒါယကာမလေးကရော မသေ ခင်ရော သေဆုံးလို့ ဘ၀ခြားတော့ရော ခံစားရတဲ့ ဒုက္ခကနည်းသလားကွဲ့။ ဆင်ခြင်ပါကွယ်။
(မစန်း) အပြစ်ရှိတာက သူတို့သားအမိပါဘုရား။
(ဆရာတော်) ဒါယကာမလေး ဖြစ်ခဲ့ပြီးသမျှကို သေချာပြန်စမ်းစစ်ပါကွယ်။ လူ့ဘ၀မှာ ကျင်လည်တုန်း ကိုယ့်စိတ်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ်လုပ်ချင်တာကို ငါ ဆိုတဲ့အတ္တနဲ့ လုပ်ခဲ့ပြီ မဟုတ်လား။မေတ္တာနဲ့ယှဉ်ပြီး မေ တ္တာစိတ်ထားပါလို့ ဘုန်းကြီး မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ကွယ်။ခု ဘုန်းကြီးတို့ရေစက်ချ အမျှဝေမယ်ကွဲ့။ ဒါယကာမလေးကိုလည်း ရည်စူးပြီး ကုသိုလ်အမျှဝေမယ်။ဒါယကာမလေး သာဓု..ခေါ်ဆိုလှည့်နော်။
ထိုသို့မိန့်ပြီးနောက် ဆရာတော်သည် တရားနာ ရေစက်ချပွဲကို စလေပြီ။ထိုအချိန်တွင် မစန်းသည် ဦးပဉ္ဖင်း လေးကိုတလှည့် ဒေါ်ဝင်းကိုတစ်လှည့် တရားနာလာကြကုန်သော နှင်းနွယ်၏ မိဘများကို တစ်လှည့်ဖြင့် မျက်ရည်တို့ဝဲလျက် စိုက်ကြည့်နေ၏။ထိုသို့ဖြင့် တရားနာပွဲပြီးဆုံးပြီးနောက်..
(ဆရာတော်) ဘ၀တစ်ပါးသို့ ပြောင်းသွားလေပြီဖြစ်သော ဒါယကာမလေး နှင်းနွယ်ရေ အမျှ အမျှ အမျှ…
နှင်းနွယ် မျက်ရည်တို့ေ၀၀ါးနေသည့် ကြားမှ သာဓု သာဓု သာဓု ..
သူမကြိုးစားလို့ အားတင်းပြီး သာဓုခေါ် လိုက်သည်။ ထို့နောက် သူမလွင့်ကနဲ …ဘယ်နေရာ ဘယ်သောင် ဘယ်ကမ်း ဘာရယ်မသိသော သံသရာခရီးကိုဆက်သွားရပေအုန်းမည်.
နှုတ်ဆက်ခဲ့တယ် မောင်ရယ်။နောက်ဆုံးတော့လေ ဒီအမိုက်မ သံသရာကိုမကြောက် မှောင်မှောင်မှာ မိုက်ခဲ့ တာကြောင့် မောင့်ကို ချစ်မိခဲ့တဲ့ ဟောဒီက မိနှင်းနွယ် မှာပဲ အပြစ်ရှိပါတယ်။ ချစ်လွန်းခဲ့တာကိုက မိနှင်းနွယ်ရဲ့ ဒုက္ခတွေအစလို့ ပြောရမလိုပါပဲ။ သံသရာမှာ ရေစက်မကုန်လို့ ပြန်ဆုံခဲ့ရင်ဖြင့် နှင်းနွယ် လိုချင်တဲ့ အချစ်နဲ့ ချစ်ပေးပါလို့ပဲ နှင်းနွယ် မှာခဲ့ပါရစေ မောင်။
ဦးပဉ္ဖင်းတစ်ဖြင့်လည်း သက်ပိုင် စိတ်ထဲက ကြိတ်ပြီးဆုတောင်းမိသည်။သွားပေအုန်းတော့ ဒါယကာမလေး နှင်းနွယ်ရေ.. နောင်ဘ၀ ဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းခုလို ရင်နင့်စရာ အဖြစ်မျိုးနဲ့ မကြုံတွေ့ပါရစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်ကွယ်။ဦးပဉ္ဖင်းလဲ တစ်ကယ့်အေးချမ်းရာ အစစ်အမှန်ဖြစ်တဲ့ တရားဓမ္မနဲ့ပဲ မွေ့လျော်ပါတော့မယ်။၀ဋ်ကြွေးရှိရင်ဖြင့် ဒီဘ၀ ဒီမျှနဲ့ပဲ ကျေပါစေတော့လို့ ဆုတောင်းပေးလိုက် ပါတယ်ကွယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ နောက်ဆုံးကိုရေးတဲ့ အခါမှာ တော်တော်လေးကိုသတိထားပြီးရေးရပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘုန်းကြီးတရား ဟောတဲ့ စာလုံးတွေပါနေတာကြောင့် ၀ါသနာအရစာရေးသော ဆွေလေးမှာအရမ်းကြီးကို သတိထားရပါတယ်။ အမှားမပါစေချင်လို့ပါ။ စာသားတွေ စကားလုံးတွေကိုလဲ အရမ်းကြီးမလျှော့ရဲ.. ဇာတ်သိမ်းကြမှ ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်ကြီး ဖြစ်သွားမှာကိုလဲ စိုးရိမ်ပါတယ်။
ဇာတ်အိမ် အခွံ ကြီးထဲ ကိုယ့်ဝါသနာ ဇာတ်လမ်းလေးဆွဲထည့်ရတာမို့ အမှားလေးများပါရင် ခွှင့်လွတ်ပေးပါလို့ ပြောပါရစေ။
ကျွန်မချစ်မိ အပြစ်ရှိ၏ (အပိုင်း-၂)
ဟာ .. သက်ပိုင် သတိလစ်သွားပြီး။ ဒေါ်ကြီးဝင်းရေ လုပ်ပါအုန်း ဒီမှာ သက်ပိုင် ကိုခေါ်လို့မရတော့ဘူး။
အိမ်ပေါ်မှ လူငယ်တွေရဲ့ အော်သံကြောင့် အိမ်အောက်မှ ဒေါ်ဝင်းနှင့် လူကြီးများ အိမ်ပေါ်တက်လာကြသည်။ ထို့နောက် သတိလစ်နေသော သက်ပိုင်အား အိမ်ရှေ့ ဘုရားစင်အောက်တွင် ဖျာခင်းပြီး ဘုရားစင်မှ ပရိတ်ရေ မန်းများ နှင့် ပက်သူကပက် ဖြန်းသူကဖြန်း သတိပြန်လည်လာအောင် ပြုစုသူက ပြုစုနှင့် လူကြီးများ အလုပ် များနေကြသည်။ခဏမျှကြာသော် သက်ပိုင် သတိပြန်လည်လာသည်။
(သက်ပိုင်) နွယ် ….နွယ် မသွားနဲ့လေ မောင့်ကိုပါခေါ်သွားပါ။ မောင်လဲ လိုက်မယ်။ မောင်လဲ လိုက်မယ်။
ပါးစပ်ကအော်လဲ အော် ငေါက်ကနဲထထိုင်ကာ ပြန်ထွက်ပြေးပြန်၏။ ထို့ကြောင့် သက်ပိုင်အား ခဏမျှငြိမ် အောင်ရည်ရွယ်လျှက် ပြန်လည်ဖမ်းချုပ်ကာ ကြိုးဖြစ်သာ တုတ်နှောင်ထားရလေတော့သည်။ သို့တည်းမ ဟုတ် သက်ပိုင်သည်ပြန်လည်ထွက်ပြေးအုန်းမည်။ လူငယ်များသည်လဲ တစ်ဖန်ပြန်ဖမ်းရလေ အုန်းမည်။
(ဒေါ်ဝင်း) ဒီညတော့ ကျုပ်အိမ်မှာ လာစောင့်အိပ်ပေးကြပါတော်။ သားတစ်ခုခုဖြစ်မှာ စိုးလို့ပါ။ ခုလဲ သားကို ကြိုးချည်ရက်ကြီး မြင်ရတာ စိတ်ထဲမကောင်းဘူး။
ဟူ၍ ငိုသံအက်အက်နှင့် ပြော၏။ထို့ကြောင့် အသုဘလာစောင့်ကြသော လူငယ်တွေလဲ အသု ဘ အိမ်တစ်ဝက် သက်ပိုင်တို့ အိမ် တစ်ဝက်နှင့် လူခွဲစောင့်ပြီ အိပ်ကြရလေသည်။ သက်ပိုင် အပါအ၀င် လူငယ်များ အိမ်ရှေ့ ဘုရားစင်ရှေ့ အိပ်ကြ၏။လူကြီးများကတော့ အိပ်ခန်းထဲ ၀င်အိပ်ကြလေတော့သည်။ အချိန်ကား မနက် ၂ နာရီလောက်ရှိပြီ ထို့အပြင် သက်ပိုင်ကိုလည်း ကြိုးများဖြင့် ချည်နှောင်ထားသည်မို့ လူငယ်များလဲ ခုနက ဆွဲထားလွဲထားသည့် ပင်ပန်းမှုဒဏ်ဖြင့် ခဏမျှ အိပ်ပျော်သွားကြလေ တော့သည်။
မနက် ဝေလင်းဝေလင်း ၅ နာရီလောက် ဒေါ်ဝင်း နိုးလာသဖြင့် သားအခြေအနေကို အိမ်ရှေ့ခန်းထွက်၍ ကြည့်မိသော အခါ။
(ဒေါ်ဝင်း) ဟင်.. သားတို့ ထကြပါအုန်း။ သက်ပိုင်ရော သက်ပိုင်မရှိတော့ဘူး။ ဒုက္ခပါပဲ …
ဒီလို ငိုသံပါနှင့် ဒေါ်ဝင်းနိုးလိုက်တော့မှ လူငယ်များနိုးလာကြကုန်၏။သက်ပိုင်အား ပြန်လိုက်ရှာလိုက်သောအ ခါ သူတို့ အ်ိမ်နောက်ဖေးရှိ သစ်ပင်ကြီးအောက်တွင် သတိလစ်နေသော သက်ပိုင်အား ပြန်လည်တွေ့ရှိရလေ တော့သည်။ထိုနေ့တစ်နေ့လုံး သက်ပိုင်သည် သတိပြန်မလည်လာခဲ့။
ဒီလိုနှင့် နှင်းနွယ်ကို အသုဘချမည့် ရက်သို့ရောက်လာခဲ့လေပြီ။ ဒီတော့ နှင်းနွယ်တို့အိမ်မှ အပူလုံးကြွ၍ ငိုနေကြသလို ဒေါ်ဝင်းသည်လဲ သူမ၏သား သက်ပိုင်အတွက် တစ်ငိုငိုတစ်ရီရီဖြစ်လေပြီ။ လမ်းထဲမှ လူများလဲ သူတို့နှစ်အိမ်ကိုကြည့်ပြီး တစ်ချို့ကလဲ နှင်းနွယ်သည် မိုက်လွန်းသည်။ တစ်ချို့ကလဲ ဒေါ်ဝင်းသည် အတ္တကြီး လွန်းသည်နှင့် တီးတိုးတီးတိုး သဖန်းပိုးကြလေသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ ကာယကံရှင်များ၏ ရင်ထဲတွင်တော့ သောက အပူလုံးလှိုင်းတို့သည် ပြင်းထန်လှသည် တစ်ကား…
ထို့နေ့ ညဘက်တွင် သက်ပိုင် သတိပြန်လည်လာခဲ့သည်။ သို့သော် ..
(သက်ပိုင်) အမေ..နွယ်ကလေ ကျွန်တော့ကိုပြောတယ် သူနဲ့တစ်ခါတည်းလိုက်ခဲ့ပါတဲ့။ဟိုနေ့က သားကို သူပဲ ကြိုးလာဖြေပေးတာလေ။ အဲဒါ ကျွန်တော် နွယ်နဲ့ လိုက်သွားချင်လို့ ခွှင့်ပြုပါအမေရယ်နော်။ ဒီမို့ဆို နွယ်သနားပါတယ်။ သူသားဘေးနားမှာ အမြဲရှိတယ်။ ပြီးတော့ ငိုနေတယ် အမေရဲ့။ သားလိုက်သွားမယ်နော် ..နော် ..အမေ..
(ဒေါ်ဝင်း) အေးပါ သားနေကောင်းအောင်အရင်လုပ်ပေါ့ ပြီးတော့ အမေ ကြည့်စီစဉ်ပေးပါ့မယ်။ နော်သား..
ဘုရား ဘုရား ကယ်တော်မူပါ။ တပည့်တော်မသားလေးကို ကယ်တော်မူပါ။ သမီး နှင်းနွယ်ရယ်အန်တီတောင်း ပန်ပါတယ်။ဘ၀ခြားသွားပြီပဲကွယ် သားကိုတော့ ဒုက္ခမပေးပါနဲ့ကွယ်။ အန်တီ့ အပြစ်တွေပါကွယ်။ ဒေါ်ဝင်း သူမ၏ စိတ်ထဲမှ နေ၍ ကြိတ်ပြီးဆုတောင်းနေမိသည်။ သားသည် ပထမနေ့ကလောက်တော့ မကြမ်းတော့ ။ သို့သော်..ဒီ ၁ ရက် ၂ ရက်အတွင် သက်ပိုင်၏စိတ်များသည် မထင်မှတ်လောက်အောင် ကြောင်တောင် တောင် နိုင်လွန်းနေသည်။
ဟင်း..ဟင်း…ဘာအခုမှလာပြီတောင်းပန်နေတာလဲကြီးဒေါ်ဝင်းရဲ့။အရင်ကထဲကရှင်ဒီလိုဆိုရင် ကျွန်မတောင်သေပေးစရာမလိုဘူး။ ရှင့်သားကျတော့ ရှင်သိတတ်သလား။ဟင်းဟင်း. ခုတော့ လူ့ဘ၀တုန်း ကမရခဲ့တဲ့ ရှင့်သားကို ကျွန်မရအောင်ယူပြမယ်။ဟားဟား….ရှင်တားနိုင်ရင် တားလေ တားပေါ့။ ခုတော့ ရှင် ဘာတတ်နိုင်သေးတုန်း။ ပြီးတော့ ကျွန်မမောင့် ကိုချစ်တယ်။ရအောင်ခေါ်မှာ..ရအောင်ခေါ်မှာ..
ဒီလိုနှင့် အသုဘရက်လည်ပြီးနောက်တစ်နေ့ ညဘက်တွင်တော့
(သက်ပိုင်) အမေ ဟိုမှာ အိမ်ပေါက်ဝက နှင်းနွယ်လာခေါ်နေတယ်။လက်ယက်ပြီးခေါ်နေတာ။လိုက်သွားမယ် လိုက်သွားမယ်။ နွယ်ရေ မောင်လာပြီ မောင်လာပြီ..
ပြောလဲပြော ထပြီးတော့လဲ ပြေးထွက်သွားပြန်၏။ အနည်းငယ်သာစောင့်အိပ်ကြသော လူငယ်တို့လဲ သက်ပိုင်ကို ပြန်ထိန်းနေရ၏။ ထိုအချိန်တွင်ပင် ကျောချမ်းဖွယ်ရာ ခွေးအူသံကြီးများ စကြားရလေတော့သည်။ သက်ပိုင်ကို ပြန်ဖမ်းချုပ်နေရင်း လူငယ်တစ်ယောက်သည် အမှတ်တမဲ့ အိမ်ရှေ့ လမ်းမပေါ် မျက်စိရောက် သွားသော အခါ
ဟာ…ဟာ… ဟေ့ကောင်တွေ မြင်လား ဟိုမှာ လမ်းမီးရောင်အောက်မှာ မိန်းမတစ်ယောက်မတ်တပ် ရပ်နေတယ်ကွ။ ဟိုမှာ မြင်လား..
ထိုလူငယ်ပြောသဖြင့် လူငယ်အားလုံးထိုနေရာ သို့ကြည့်လိုက်သော် အခါ..
ဘယ်မှာလဲကွ မရှိပါဘူး။ ငါတို့မတွေ့ပါဘူးကွ။
အင်း ဟုတ်တယ်ကွ ငါလဲမတွေ့တော့ဘူး.ဒါပေမယ့် ခုနက ငါမြင်တာသေချာတယ်ကွ။
ဒီလိုနှင့် သက်ပိုင်အား ကြိုးများဖြင့် တုတ်နှောင်ပြီး ညဘက်ထိုင်စောင့်ရပြန်၏။ ဤတစ်ကြိမ်တွင်တော့ လူငယ် များသည် မအိပ်ရဲတော့။ သက်ပိုင်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပျောက်သွားမှာ စိုးရိမ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သက်ပိုင်ကိုကြိုးချည်ပြီး ခဏမျှ ပြန်လည်တိတ်ဆိတ်သွားပြီ ခဏ။ အသံတစ်ခုစကြားလာရ၏။
ထို့နောက် အိမ်ခေါင်းရင်းဘက် ကာထားသော အကာအား ၃ လေးချက်မျှ တစ်ဖုန်းဖုန်းထုပြန်၏။ လူငယ်များလဲ ကြောက်လန့်တစ်ကြားဖြင့် ဘုရားစာ ရွတ်သူရွတ်
(ဒေါ်ဝင်း) သားတို့ ဘာမှ မကြောက်ကြနဲ့နော်. အိမ်မှာ ဘုရားရှိနေတာပဲကွယ် .
ဒေါ်ဝင်း ပြောသာပြောရသည် သူမတစ်ကိုယ်လုံး ကြက်သီးမွှေးညင်းများထနေ၏။သူမလဲ ကြောက်သည်။ သားကတော့ ပါးစပ်မှ အသံနက်ကြီးဖြင့် အော်တုန်း။ ကြိုးချည်ထား၍ လက်ကမလှုပ်နိုင်သော်လည် မောင်လဲ လိုက်မယ်ဆိုသော စကားကတော့ ပြောတုန်း။ လူငယ်တွေကိုလဲ အားနာလှပြီဖြစ်သည်။ သူတို့လဲ ညဘက် သက်ပိုင်အား တစ်လှည့်စီ လာပြီ စောင့်အိပ်ပေးကြရသဖြင့် ပင်ပန်းကြလေပြီ။သည်လိုနှင့် ၉ ရက် ၁၀ ရက် ၂ ပတ်ကျော်ကျော် ကြာနေခဲ့သော်လည်း သက်ပိုင်သည်နေ့ဘက်တွင် မျက်လုံးတွေက ဟိုကြည့် သည်ကြည့် ကြောင်စီစီနိုင်လှစွာဖြင့် ငြိမ်နေသော်လည်း ညဘက် ခွေးအူသံများစပြီး ကြားရပြီဆိုလျှင် သက်ပိုင် ထကြမ်း လေသည်။ တစ်နေ့တစ်ခြား အားပိုကောင်းလာသလို ဖြစ်လာ၏။ လူငယ် ၁၀ ယောက်ပင် ဆွဲထိန်းသော်လဲ မရချင်။ ကြိုးတုတ်နှောင်ထားသော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံ ကြိုးပင် ပြတ်ထွက်တတ်သည်။ပြီးလူငယ် များသည်လည်း ဓာတ်တိုင်အောက်မှ မိန်းမတစ်ယောက် မတ်တတ်ရပ်နေသည်မှာ အမှန်ဆိုသည်ကို ညတိုင်း မြင်ကြရ၏။ အိမ်ခေါင်းရင်း အကာအားလဲ တစ်ဖုန်းဖုန်းလာလာထုတတ်၏။ ကြာသော် စောင့်အိပ်ပေးသော လူငယ်များလည်း ကြောက်ရွံ့လာကြ၏။ သက်ပိုင်သည်လည်း အရိုးပေါ်အရေတင်သာ ရှိတော့သည်။ အစားလဲ ကောင်းကောင်းမစား ညဘက်ဆိုလဲ မအိပ် သည်ပုံတိုင်းဆိုလျှင် သက်ပိုင်သည်လည်း မကြာခင် နှင်းနွယ်နောက် လိုက်ရပေတော့မည်။
(ဒေါ်ဝင်း) ဒေါ်မြိုင်တို့ လမ်းထဲကလူကြီးတွေ အကြံပေးကြပါအုန်းးတော်။ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ ပရိတ်ချည်ဆွဲပေးလဲမရ။ ဆရာတွေခေါ်တာလဲ စုံပြီ။ ပရောဂတွေရော ရောဂါပြတဲ့ ဆရာဝန်တွေ ရောစုံနေပြီ သားက တစ်နေ့တစ်ခြားပိုပိုဆိုးလာတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟင်။ ကျုပ်မှားပါတယ်တော်.. ကျုပ်ကို ကူညီကြပါအုန်း။
(ဦးတင်ဝင်း) ဒီလိုလုပ်ပါလား ကျုပ်တို့ရွာမှာ ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်။ အဲဒီဆရာတော် သွားပင့်ပြီးလျှောက်ကြည့်ရင် မကောင်းဘူးလား။ အဲဒီဆရာတော်ကတော့ သီလလဲရှိတယ်။ပြီးတော့ ခုလိုမျိုး တွေ ဖြစ်လာရင်လဲ သူလိုက်လိုက်ပြီး မေတ္တာနဲ့ ကုပေးတတ်တယ်။ ပျောက်လဲ ပျောက်ကြတယ်။
(ဒေါ်ဝင်း) စမ်းကြည့်ရတာပေါ့တော်။ ကိုတင်ဝင်း တော်သွားပင့်ပေးမှာလား။ ဆရာတော်က ဘယ်မှာ သွားပင့် ရမှာလဲ။ဘယ်နှစ်ရက်လောက်ကြာမလဲဟင်။ သားအခြေအနေက တစ်နေ့တစ်ခြား ပိုပိုဆိုးလာတာ မြင်ကြတဲ့ တိုင်းပဲလေ။ ညဘက် သားထထအော်တာနဲ့ ခွေးအူသံတွေကြောင့် လမ်းထဲက လူတွေ အိပ်ရေးပျက်ကြတာ လဲ ကျုပ်အားနာလှပြီ။ ပြီးတော့ သားကိုလာစောင့်ပေးတဲ့ ကလေးတွေလဲ ပင်ပန်းလှပြီလေ။ကူညီကြတဲ့ လူအားလုံးကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
(ဦးတင်ဝင်း) ခက်တာက ဆရာတော်က ခရီးထွက်နေတာများတယ်ဗျ။ ကျုပ်သွားတော့ လျှောက်ကြည့်မယ်။ ဆရာတော် ကျောင်းမှာရှိနေရင်တော့ ကံကောင်းတာပေါ့။ ခင်ဗျားရဲ့ သားကံပေါ့ဗျာ။ ၃ ရက်လောက်တော့ ကြာမယ်ထင်တယ်ဗျ အသွားအပြန်။ ဒီလိုလုပ် ဒီရက်ပိုင်း ခင်ဗျားလဲ နဲနဲ စိတ်အေးအောင် အဲဒီဆရာတော် ဘုရားကြီးရဲ့ ပရိတ်ရေမန်း ကျုပ်အိမ်မှာ ရှိတယ်။ လိုက်ယူလိုက်။ ပြီးရင် ခင်ဗျားအိမ်ကို လာစောင့်အိပ်မယ့် ကလေး တွေအားလုံးစုံပြီးဆိုတာနဲ့ ခင်ဗျား အိမ်ပေါက်ဝတွေ ခြံပေါက်ဝတွေကို လိုက်ဖျန်း။ ပြီးရင် အိမ်ထဲက အိမ်ပြင် တစ်ယောက်မှ မထွက်နဲ့တော့ ။ အိမ်ထဲမှာပဲနေတော့ ။ ခင်ဗျားသားကိုလဲ ဖျန်းပေးထားလိုက်။
(ဒေါ်ဝင်း) ရပါ့မလားရှင်။တော်ကြာ မနိုင်ရင် ပိုဆိုးကုန်မှာလဲဆိုးရတယ်။
(ဦးတင်ဝင်း) ခင်ဗျား ယုံယုံကြည်ကြည်သာ လုပ်ပါ ကျုပ်အာမခံတယ်။ခင်ဗျားအိမ်လာစောင့်အိပ်မယ့် ခလေး တွေကို နေမ၀င်ခင် အိမ်ထဲစုစည်းထားပြီး နေ၀င်တာနဲ့ ပရိတ်ရည် ဖျန်းရင်တော့ ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်ဗျ။ လမ်းထဲက တတ်သိနားလည်တဲ့ လူကြီးတွေလဲ ဒေါ်ဝင်းတို့ အိမ် သွားအိပ်ပေးလိုက်ပါဗျာ။ ဒါဆို ကလေး တွေလဲ ပိုအားရှိလာမယ်ထင်တယ်။ဆရာတော်ကြွ်လာပြီးရင်တော့ စောင့်အိပ်ပေးဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။
ဒီရက်ပိုင်းတော့ ကူညီလိုက်ကြပါဗျာ။ နော်..ဟုတ်ပြီလား
ည ၁၂ နာရီ ခွေးအူသံတွေစပြီး ကြားနေရပြီ။ ဒီည ဦးတင်ဝင်းပြောသလို လုပ်ထား၏။ သို့သော် အားလုံးကတော့ အရင်နေ့တွေမှ အတွေ့အကြုံများအရ ကြောက်ရွံ့နေကြပြီ ဖြစ်သည်။
အပိုင်း(၃) ကိုနောက်ရက်တွေမှ ပဲ ဆက်တင်ပေးပါတော့မယ်။
Posted by ဆွေလေးမွန်3comments
ကျွန်မချစ်မိ အပြစ်ရှိ၏ (အပိုင်း-၁)
(နှင်းနွယ်) မောင် ဒီညနွယ်တို့တွေ့နေကျနေရာမှာ စောင့်နေမယ်နော်။ နွယ်ကတော့ စကားကို အကုန်ပြော ပြီးပြီ ကျန်တာတော့ မောင်ဆုံးဖြတ်တော့နော်။ မောင်နဲ့တော့ ရှင်ခွဲတော့ မခွဲနိုင်ဘူးနော် မောင်။
(သက်ပိုင်) ဟင်း……………အင်းပါ နွယ် မောင် လာဖြစ်အောင်လာပါ့မယ်။
ခက်သည်။ နွယ်နှင့် သူ့အမေနှင့်ကြားမှာ ဘယ်လိုမှညှိလို့မရ။ ခုတော့ နွယ်ကဒီညမှာ နှစ်ယောက်သားထွက် ပြေးကြဖို့ပြောနေပြီဖြစ်သည်။ သက်ပိုင်သာ ဒီညမလာလျှင် သူမသည် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် သတ်သေပစ် လိုက်မည်ဟုလဲ ပြောထားသေးသည်။ပြီးတော့ နွယ်ကို သက်ပိုင်ချစ်သည်။ သူလဲနွယ်နှင့်မခွဲနိုင်။ အမေ့ကို မလွန်ဆန်နိုင်၍သာ သက်ပိုင်တွေဝေနေရချင်းဖြစ်သည်။
(ဒေါ်မြိုင်) ဒေါ်ဝင်း တော့်သားသက်ပိုင်နဲ့ တော်တို့ခေါင်းရင်းအိမ်က နှင်းနွယ်ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ ကြိုက် နေတယ်ဆို။အဲဒီကောင်မလေးက နဲနဲခောတ်ဆန်တယ်နော်။ ပြီးတော့ အနေအထိုင်ကလဲ ရဲတင်းပ။ တော်ကြည့်ပြီး ထိန်းအုန်းနော် တော့်သားကို။
(ဒေါ်ဝင်း) အမယ်လေး ဒေါ်မြိုင်ရယ် ဒီမိန်းကလေးလောက်တော့ ဟောဒီက ဒေါ်ဝင်းတို့က သနားပ။ အဲဒီလို မိန်းကလေးမျိူးတော့ ချွေးမမတော်နီုင်ဘူးတော်ရေ။ ငါးပိရည်ကျဲတောင် ကောင်းကောင်းကျိူနိုင်ပမလားမသိ။ ဒီကြားထဲ သွားလိုက်လာလိုက်တာလဲ အိမ်ချင်းကလဲ ကပ်ရက်ဆိုတော့ ပြောမနေနဲ့။ ရွှတ်ကနဲ ရွှတ်ကနဲ တွေ့နေရတော့ မျက်စိထဲ ထောင့်မကျိုးပါဘူးတော်။ အ်ိမ်ကကောင်ကိုတော့ နိုင်အောင်တော့ ထိန်းမှရမယ်
ဒေါ်မြိုင်ရေ။ ကဲကဲ ကျုပ်လဲ အိမ်ပြန်ပြီ ညနေစာ ထမင်းချက်လိုက်အုန်းမယ်။ သွားပြီတော်ရေ။
ညည့်သည်နက်သထက်နက်လာ၏။ အမှောင်ထုလဲ ကြီးစိုးလာလေပြီ။သက်ပိုင် သူ့အမေကိုချောင်းနေသည် ဒီနေ့မှ သက်ပိုင်အမေက အိပ်ယာမ၀င်သေး။ သူရင်တွေတော့ခုန်လွန်းနေသည်။ လူတစ်ကိုယ်လုံး နတ်ပူး သလိုတုန်ရင်နေ၏။ ဟော အမေအိပ်ပြီထင်တယ် ။မီးလဲမှိတ်သွားပြီ။ အသံတွေအားလုံးလဲ တိတ်ဆိတ်သွား လေပြီ။သူခြေသံမကြားအောင်ကိုယ်ကိုဖော့နင်း၍ အိမ်နောက်ဖေးတံခါးသို့ အသာလေး ထွက်လာခဲ့သည်။ နွယ် စောင့်နေပေတော့မည်။ စိတ်ထဲမှာတော့ ကြည်နူးမိသလိုလို ဒါပေမယ့် အမေ့ ကိုတော့သနားလှသည် သားကိုခွင့်လွှတ်ပါအမေရယ်။
(ဒေါ်ဝင်း) ဒါကဘယ်ကိုလဲ သက်ပိုင်။ ဒီလောက် ညမိုးချုပ်နေတာတောင်မှ။ ဘယ်ကိုသဝေထိုးအုန်းမလို့လဲ။
သက်ပိုင် တစ်ကိုယ်လုံး ဆတ်ကနဲ တုန်သွား၏။သူ့အမေသည် သူ့နောက်မှ ကပ်၍ပြောလိုက်သော်လည်း အသံသည် သူ့နားထဲ ဟိန်းကနဲ ဖြစ်သွား၏။
(သက်ပိုင်) အ..အမေ မအိပ်သေးဘူးလား။
(ဒေါ်ဝင်း) နင့်ကိုငါမွေးထားတာပါ သက်ပိုင်ရဲ့။ နင့်ပါးစပ်ဟလိုက်တာနဲ့ အူဘယ်နှစ်ခွေရှိသလဲဆိုတာ ငါသိပြီးသား။ သွားအိမ်ထဲပြန်ဝင် ပြီးအိပ်တော့။
(သက်ပိုင်)သား ဒီညမသွားလို့မဖြစ်ဘူး အမေ။ သားကို သွားခွင့်ပြုပါ။
(ဒေါ်ဝင်း) အေးလေ ဒီလောကကြီးမှာ ဆွေရယ်မျိုးရယ်ဆိုလို့ ဒီသားနဲ့ ဒီအမေရှိတာ။ မိုက်တဲ့သားမွေးထားမိ တော့လဲ ငါလို အမေအိုကြီး ဘာတတ်နိုင်မှာတုန်း။ ငါ့ကံကိုက ဆိုးပေတာကိုး။ အေးနင်ဒီညထွက်သွားပြီးလို့ ကတော့ ငါသေရင်တောင် ငါ့အလောင်းနင် သဂြိုလ်စရာမလိုဘူး သက်ပိုင်။ ငါစကားအပြတ်ပြောပြီးပြီ ကျန်တာတော့ နင်သဘော..ဒါပဲ
သူဘာလုပ်ရမည်နည်း။ နွယ်ဒီလောက်တော့ မမိုက်လောက်ဘူးလို့ သူထင်သည်။ မနက်ကျနွယ်နှင့်တွေ့မှ သူ အကျိုးအကြောင်းရှင်းပြမည်။ ချိန်းထားတာကလဲ သူတို့ အိမ်နောက်ဖေးက သစ်ပင်ကြီးအောက်တင်ဆို တော့ နွယ် အတွက်လဲ သိပ်ပြီးစိုးရိမ်စရာမလို။ သူမလာလျှင် နွယ်သည် သူမအိမ်သို့ ပြန်ဝင်သွားလိမ့် မည် ဟု ထင်သည်။ဒီညတော့ သူ့အမေနှင့် ထိပ်တိုက်မတွေ့လိုတော့။နောက်နေ့တွေ ဆက်ပြီး ကြိုးစားလို့ရနေ သေးသည်။ ထို့ကြောင့် သက်ပိုင်၏ ခြေလှမ်းများကို အိမ်ထဲသို့ ပြန်လှည့်လိုက်မိတော့သည်။
မောင် အရမ်းရက်စက်တာပဲ။နွယ်ကို မောင်တစ်ကယ်မချစ်ဘူး။ လိမ်တယ်။နွယ်ကို လိမ်တယ်။ နွယ်ကတော့ မောင့်ကိုယ်ချစ်လိုက်ရတာ။ပြီးတော့ ခုလောက်ဆို မောင့်ရဲ့အမေကြီးကလဲ နွယ်ကိုလှောင်ရီ ရယ်နေလောက် ပြီ။ နွယ့် မာနတွေရိုက်ချိုးခံလိုက်ရတာ။ နွယ်ပြောပြီးသား မောင်နဲ့ ရှင်ခွဲတော့ မခွဲနိုင်ဘူး.။သေကွဲပဲ အကွဲခံ လိုက်မယ်။
နွယ် သူ့ကိုစကားတွေပြောပြီး နက်ရှိုင်းသော ချောက်ကမ်းပါးကြီး ဘက်ကို သွားနေသည်။ နွယ်မသွားနဲ့လေ။ ချောက်ထဲကျသွားမယ်လေ။နွယ်မသွားနဲ့လေ မောင်ရှင်းပြပါရစေ။ မောင်ပြောတာကို နားထောင်ပါအုန်းနွယ်။ နွယ် ..နွယ် ..နွယ် ရေ..နွယ် သက်ပိုင် အော်ခေါ်နေသော်လဲ နွယ်သည် နောက်သို့ ပြန်လှည့်မကြည့်။ ရှေ့မှာ ရှိသော ချောက်ကမ်းပါးကြီးထဲသို့ နွယ်ခုန်ချသွားသည်။
အား ..နွယ် သေပါပြီ။ နွယ် …နွယ်ရေ…
သက်ပိုင် အိမ်မက်မှနေ၍ လန့်နိုးလာခဲ့သည်။ ချွေးတို့လဲ တစ်ကိုယ်လုံး ရွှဲစိုလို့။မဖြစ်ဘူး မဖြစ်ဘူး နွယ့်ကို သွားတွေ့မှ ဖြစ်မည်။ သို့သော်..သက်ပိုင်တို့ အ်ိမ်ခေါင်းရင်းမှ စီကနဲထွက်လာသော ငိုသံ..
“အမယ်လေး သမီးအမိုက်မရဲ့ မိုက်လှချည်လား အဲဒါ အဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာဟဲ့ဟင်။ နင်သံသရာကိုများ နဲနဲ လေးမှ တွေးပြီး မကြောက်မိဘူးလား အမိုက်မရဲ့။ အီး…ဟီး..ဟီး.”
ဒါဆို ဒါဆို နွယ် သူမပြောသည့်အတိုင်း..ဘုရားရေ..နွယ်ရေ ကိုယ်လာပြီ ကိုယ်လာပြီ သက်ပိုင်အိပ်ခန်းထဲမှ အိမ်ရှေ့တံခါးမကြီးသို့ ပြေးထွက်လာခဲ့မိသည်။ မိုက်လိုက်တာနွယ်ရယ်။ စိတ်ထဲမှာ ယူကျိုးမရတဲ့စိတ် ပြင်း ထန်သော နောင်တမုန်တိုင်း ပြီးတော့ နွယ်သေရတာ သူ့ကြောင့်..
(ဒေါ်ဝင်း) သက်ပိုင် မင်းအဲဒီအိမ်ကိုခုနေသွားတော့ မင်းကိုဝိုင်းပြီး သတ်ကြမှာပေါ့ဟဲ့။ သေတဲ့သူကလဲ သေသွားပြီ ။ မင်းသွားစရာမလိုဘူး။
(သက်ပိုင်) ကျွန်တော်သွားပါရစေ အမေ။ နွယ့် မျက်နှာလေးကို တစ်ခေါက်လောက်တော့ သွားကြည့်ပါရစေ။
ဒီကောင်မလေးဒီလောက်ထိ လုပ်လိမ့်မယ်လို့ မထင်။ခုလို ဖြစ်သွားတော့လဲ စိတ်မကောင်း။ ဒါပေမယ့် သား အတွက်တော့ ကာကွယ်မှဖြစ်မည်။
(ဒေါ်ဝင်း) မလိုဘူး သက်ပိုင်။ အေး..နင်သွားကြည့်ပြီးဆိုတာနဲ့ တစ်ခါထဲ တွက်ထား အိမ်ပြန်လာတာနဲ့ နင့်အ မေ ငါ့အလောင်းလဲ မြင်ရပြီလို့။ ဟွန်း သားတစ်ယောက်ရှိပါတယ် အားမကိုးရသေးတဲ့ အပြင် သူ့ ပြသနာ လိုက်ရှင်းနေရတယ်။ ငါ့ကိုလဲ စိတ်ချမ်းသာ အောင် ထားစမ်းပါအုန်း သက်ပိုင်ရဲ့။ ငါ အမေအိုကြီးပါဟဲ့။
သက်ပိုင် အိမ်ထဲကို ခြေလှမ်းပြန်လှည့်လိုက်သည်။ သူ့အမေအား ဘာမှတော့ ပြန်မပြောတော့။ ပြီးတော့ သူ့အိပ်ခန်းထဲဝင်သွားသည်။ ခဏမျှကြာတော့ သက်ပိုင်အခန်းထဲမှ ပစ္စည်းတွေ ၀ုန်းဒိုင်းနှင့်ပေါက်ခွဲသံတွေ ကြားရသည်။ ခဏကြာသော် ပြန်လည်တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်သွားသည်။
ဒေါ်ဝင်းစိတ်ပူလှသည်။ မနက် အ်ိပ်ခန်းထဲဝင်သွားပြီကထဲက သားပြန်ထွက်မလာသေး။ နေပါစေဆိုပြီ လွတ်ထားပေမယ့် ခုည ၁၀ နာရီကျော်ကျော်ရှိနေပြီ။ ငြိမ်သက်နေ၏။ တော်ကြာ သားပါ..တစ်ခုခု လုပ်သွားမှ ဖြင့် ဘုရား..ဘုရား ခုမှ စဉ်းစားမိသည် အတွေးထဲတွင်ပင် ဒေါ်ဝင်း စိုးရိမ်စိတ်တို့သည် အထွဍ်အထိပ်သို့ ရောက်လေပြီ။ သားအခန်းပေါက်ဝသို့ အပြေးတစ်ပိုင်းသွား၍ အခန်းတံခါးကိုခေါက်မည် အပြု။သက်ပိုင်၏ အခန်းတံခါး ရုတ်တရက်ပွင့်လာသည်။ ထို့နောက်..
(သက်ပိုင်) နွယ်…နွယ် မောင့်ဆီလာတယ်။ ၀မ်းသာလိုက်တာ နွယ်ရယ်။ အင်း နွယ်ခဏစောင့် မောင်လိုက်ခဲ့ မယ်။ မောင်တို့တွေ့နေကြ သစ်ပင်ကြီးအောက်မှာ စောင့်နေနော်။မောင်ခု လိုက်ခဲ့မယ်..
ပြောပြောဆိုဆို သက်ပိုင်တစ်ယောက် ခေါင်းတွေဖီး အင်္ကျီတွေပြင်ဝတ်နှင့် ပြင်နေသည်။ ဒေါ်ဝင်းသည်လဲ ထို ခဏ၌ပင် စိမ့်ကနဲ့ဖြစ်သွားကာ ကြက်သီးမွှေးညင်းများထလာ၏။စိတ်ထဲကနေ ဘုရားတလိုက်မိသည်.။
(ဒေါ်ဝင်း) သား သား…သတိထားလေ။ သားရဲ့။ နှင်းနွယ်က သေပြီလေ သား။ ဒီလောကကြီးမှာ နှင်းနွယ်မရှိ တော့ဘူးလေ သားရဲ့။
ထိုအချိန်၌ပင် သက်ပိုင်၏ အမူအရာတို့ ချက်ချင်းပြောင်းလဲ သွားပြီး ဒေါ်ဝင်းအား မျက်ထောက်နီကြီးဖြင့် ကြည့်ကာဖြင့် စကားပြောသံထွက်လာသည်။ အသံကား သက်ပိုင်၏အသံမဟုတ်..မိန်းမတစ်ယောက်၏ အသံ
(သက်ပိုင်) ဟားဟား…ဘာပြောတယ် နှင်းနွယ်က သေပြီဟုတ်လား။ ငါမကျေနပ်ဘူး။နင်တို့သားအမိ နှစ်ယောက်လုံးကို ငါလုံးဝမကျေနပ်ဘူး။ မုန်းတယ် မုန်းတယ်။ နင့်..သားကိုလဲ ငါ့ဆီလာအောင် ခေါ်မယ်။ဟားဟား တားလိုက်စမ်း နင်တားလိုက်စမ်း…နင်တို့ ငါ့အကြောင်း ကောင်းကောင်းသိစေရမယ်ဟေ့..
သက်ပိုင် မျက်ထောက်နီကြီးဖြင့် ကြည့်ကာ ဒေါ်ဝင်းအနားတိုးကပ်လာသောကြောင့် ဒေါ်ဝင်းကြောက်လန့် တစ်ကြား အိမ်ရှေ့ခန်းပြေးထွက်ပြီး
(ဒေါ်ဝင်း) ဒေါ်မြိုင်တို့ လာကြာပါအုန်းတော်။ လာကြပါအုန်း။
ဒေါ်ဝင်း၏ ကြောက်လန့်တစ်ကြား ငယ်သံပါအောင် အော်နေသံကြောင့် ဘေး အသုဘအိမ်မှ လူများနှင့် ဒေါ်မြိုင်တို့ပါ အပြေးတစ်ပိုင်းရောက်ရှိ်လာကြသည်။ ဒေါ်ဝင်းသည် အိမ်အောက်ရောက်နေပြီ ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် အသုဘအိမ်မှ လာသော လူငယ်အုပ်စုအား အကူအညီ လှမ်းတောင်းလိုက်သည်။
(ဒေါ်ဝင်း) မောင်မြင့်အောင်ရေ လုပ်ပါအုန်းကွယ်။ မင်းသူငယ်ချင်းကိုတက်ဆွဲပါအုန်း။ တစ်ယောက်တည်း တော့ မသွားနဲ့ သား အုပ်စုလိုက်တက်ပြီး ဆွဲခေါ်ခဲ့။ သူ အ်ိမ်နောက်ဖေးက သစ်ပင်ကြီးနား သွားဖို့လုပ်နေ တယ် ကူညီကြပါကွယ်။
ထို့သို့လဲပြောပြီး ဘေးမှာ ရောက်လာသော လူများအားလဲ ခုနက သူမတွေ့မြင်ခဲ့သော အကြောင်းများအား ဖောက်သည်ပြန်ချနေ၏။ လူငယ်တစ်စုလဲ အိမ်ပေါ်သို့ တက်သွားပြီး သက်ပိုင်အား ၀င်ရောက်ဖမ်းချုပ်နေကြ ပေမယ့်။ မဆွဲနိုင်ဖြစ်နေကြ၏။ လူငယ် ၅ ယောက်အားနှင့် ဆွဲခေါ်နေတာတောင် သက်ပိုင်၏ ရုန်းကန်မှုအား မနဲ ဖမ်းချုပ်ကာ အိမ်ရှေ့ခန်း ပြန်ဆွဲလာနေရသည်။ ဘယ်လိုမှ မနိုင်ကြ။
(သက်ပိုင်)ဟေ့ ငါ့ကိုမဆွဲကြနဲ့ကွ။ ဟိုမှာ နွယ်ငါ့ကို လက်ယက်ပြီးခေါ်နေတယ်။ စောင့်နေတယ်ကွ ငါ့ကို လွှတ်ပါသူငယ်ချင်းတို့ရာ။ ငါနွယ်နဲ့ သွားတွေ့ပြစေနော်။ နော်…
အတင်းကိုရုန်းကန် တွန်းထိုးနေ၏။ ပြီးတော့ မျက်လုံးတွေကလဲ ဂဏာမငြိမ်။ ပြီးတော့ မျက်လုံးတို့သည်လဲ အလွန်ပင် နီရဲနေ၏။ထိုအချိန်တွင်ပင် နှင်းနွယ်၏ မိဘများလဲ ရောက်လာကြ၏။
“ဒီမှာ ဒေါ်ဝင်း ကျုပ်တို့ သမီးလဲ သေပါပြီတော် ခုထိ သေသွားတာတောင် ရှင်မကျေနပ် နိုင်သေးဘူးလား ခုလဲ ရှင် ကျွန်မတို့ သမီးကို မကောင်းပြောနေပြန်ပြီ တော်ပါတော့ .. သမီးရေ အမိုက်မရဲ့ ညည်းမိုက်လုံးကြီးပုံ ကြည့်စမ်း သေတာတောင် အပြစ်က မလွှတ်ပါလား သမီးရယ် ဟင်”
ဒီလို နှင်းနွယ်၏ အမေသည် အော်ငိုလိုက်သည့်အခါမှပင် အိမ်ပေါ်တွင် တွန်းထိုးရုန်းကန်နေသော သက်ပိုင် သည် နောက်သို့ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်၏။ ထို့နောက် သက်ပိုင်သည် လူငယ်များ ၀ိုင်းချုပ်ထားသော နေရာတွင်ပင် ခေါက်ကနဲလဲကျ ၍ သတိလစ်သွားလေတော့သည်။
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ဒီပို့(စ်)လေးကို နှစ်ပိုင်းတော့ ခွဲမရေးချင်ပါဘူး။ဒါပေမယ့် ရေးရမှာရှည်နေတာကြောင့် အပိုင်းခွဲတင်လိုက်ရတာပါလို့ပြောရင်းဘလော့မောင်နှမများကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့တောင်းဆုပြု လိုက်ပါတယ် ရှင်။